Isiphandla Sezikhali sesifundazwe seMpumalanga
Sinesisekelo esiluhlaza ngezwi lesiLatini - i-OMNIA LABOR VINCIT - ebhalwe kulo, okusho ukuthi, "Umsebenzi unqoba konke".
Ngaphezulu kwesisekelo yisihlangu esinomfanekiso we-Barberton daisy kuwo. Isihlangu sisekelwa yi-kudus emibili, enye ngakwesinye icala. Isihlangu sikholwa yi-crest. Lokhu kubonisa ukuthi isifundazwe yisigaba sesibili sikahulumeni. I-crest inezintaba ezintathu, ezifanekisela ilanga elikhulayo nezintaba zaseMpumalanga Drakensberg.
Isibonakaliso sesilwane - iKudu (Tragelaphus strepsiceros)
I-kudu isiphequluli, esondla amaqabunga ahlukahlukene ezihlahleni nezihlahla. I-Kudus ikhetha ukuhlala ezindaweni ezomile, izihlahla ze-mopane ne-Miombo kanye nezinkuni ezivulekile zameva eKruger National Park. I-kudu iyi-antelope yezinkomo, noma kunjalo, umhlambi uvame ukuhlukaniswa ngamaqembu amabili.
Izinsizwa ezincane zihlala nonina, kanti izinsizwa ezivuthiwe ngokobulili, ezineminyaka engaphansi kweminyaka emibili ubudala, zakha amaqembu ezinhlanhla. U-Rutting ngokuvamile ukhona phakathi kuka-Ephreli noMeyi, lapho amadoda aseKudu ejoyina khona izinkomokazi.
Akukho ukuhlukaniswa kwendawo okukhona phakathi kwezinkunzi, kodwa bavame ukuba nama-hierarchies amakhulu. Ukubeletha sekuyizinyanga ezingu-7,5, kanti ngokuvamile amathole azalwa ezinyangeni zasehlobo.
Amathole asanda kuzalwa, afike emasontweni ama-4 kuya ku-6, avame ukufihlwa ukuze awalwe nezilwane ezidliwa yizilwane, ngenkathi omama bephequlula. Umama ubelethela inzalo yakhe kuphela ukuba anakekele.
Isibonakaliso sembali- I-Barberton Daisy (i-Gerbera jamesonii)
I-Barberton daisy ingumdabu eNingizimu Afrika, iyimbali ebonayo ekhula e-rosette yamaqabunga angabonakali. Izimbali zikhula ezimthunzini ezibomvu, i-orange, ephuzi, ezimhlophe nezibomvu futhi zifunwa emhlabeni wonke ngenxa yemibala yazo. Empeleni, i-Barberton daisy icatshangwa ukuthi iyimbali enqunywe kakhulu emhlabeni ukuze kube nokuhlelwa kwezimbali.Translated by Nsika Khoza